ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် ဒီမိုကရေစီခရီးကြမ်းနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အပိုင္စားၾကီး နေရပ်- Australia :
မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်က မကိုက်လှပါဘူး "နိုင်ရံှုးကြီးဖြစ်နေပြန်ရော
Jan 18, 2018 02:21 AM
ဇီးျဖဴဆိပ္မွကိုနဂါး နေရပ်- ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ဇီးျဖဴဆိပ္ေက်းရြာ :
အမေစုရဲ့ခရီးစဉ်တွေမှာ လုံခြုံရေးအတွက်အလွန်စိုးရိမ်နေရပါတယ် ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားညီအကိုမောင်နှမများအထူးအရေးထားဂရုစိုက်ပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်
Oct 18, 2015 08:05 PM
RFAခင်ဗျား ကျွန်တော်ရဲ့ဇီးဖြူဆိပ်ကျေးရွာမှာNLDကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေမဲအသာနဲ့အနိုင်ရ ရမယ်လို့အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုRFAမှတဆင့်သိစေချင်ပါတယ် အွန်လိုင်းပေါ်မှာအမေ့ကိုဘယ်လိုတိုက်ခိုက်နေပါစေ ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီ ဦးနှောက်နဲ့စဉ်းစားနှလုံးသားနဲ့ရင်းပြီးအမေစုပါတီကိုမဲပေးသွားကြပါမယ်
Sep 24, 2015 07:52 PM
ဇီးျဖဴဆိပ္မွကိုနဂါး နေရပ်- ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ဇီးျဖဴဆိပ္ေက်းရြာ :
Aug 28, 2015 09:58 AM
အောက်မှာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဝေဖန်တာကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ် ညာဏ်မျက်စိအလင်းကွယ်တဲ့ လူရဲ့ အရေးအသားဖြစ်ပါတယ် လောကမှာ လူမထိုက်ဘဲ ဘယ်ရိုးရာနတ်က လူတင်လိုက်သလဲဆိုတာ သိကြားအဖွဲ့ကိုငါတိုင်ကြားလိုက်ပါဦးမယ်
Jun 01, 2015 05:49 AM
Khin Mg Than နေရပ်- Mandalay :
May 20, 2015 09:53 PM
Feb 02, 2015 12:38 PM
Kyi Chit Ko နေရပ်- Bangkok :
Dear Ko Khin Maung Soe,
Please ask Aunty Su... Is there any plan or program like youth leadership training as for NLD to produce new generation leader? Simply, what's NLD doing to gain new generation leader, and party members development?
Jul 03, 2014 09:27 AM
Tun Tun နေရပ်- London :
Dear U Khin Maung Soe,
There are still many expat hoping to return home but not able to do so because of the restriction to the people in the black list. Could you ask Aunty Suu on the issue of black list and her view on the Burmese people abroad.
Dr Tun Tun
Jul 29, 2013 04:24 PM
Win နေရပ်- USA :
excellent questions and answers. Ashamed not many years left to help regenerate our country.
Jun 23, 2013 03:27 PM
Jan 19, 2013 11:49 PM
Zai lwark Raol နေရပ်- Nam Khone :
Not enough for ethnic's rights.
You are working for your Burmer ethnic.
Oct 01, 2012 07:50 PM
Feb 10, 2012 07:54 AM
Feb 02, 2012 11:55 AM
Feb 02, 2012 11:53 AM
Jan 09, 2012 04:14 PM